နှလုံးသားထဲကစောမဲကျီ+ မိုင် Uploaded by ven.indobhasa at Your Listen
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."နှလုံးသားထဲကေ� ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - နှလုံးသားထဲကစောမဲကျီ+ မိုင်
Tags: နှလုံးသားထဲကစောမဲကျီသစ္စာသျှင်မစောမဲကျီမိုင်arakan songrakhine songrakhaing song
နှလုံးသားထဲကစောမဲကျီ စီးရီးခွေမှာပါရေ စောမဲကျီသခြင်းကို ကက်ဆက်နန့်ဖွင့်ပြီး mp3 နန့် အသံဖမ်းထားစွာဖြစ်ပါရေ။ ယင်းအတွက်ကြောင်း အသံကြည်လင်မှုမဟိစွာကို နားလည်ပီးကတ်ပါ။
သခြင်းနာမည်လည်း “သစ္စာသျှင်မစောမဲကျီ + မိုင်” လား၊ “နှလုံးသားထဲက စောမဲကျီ” လား သေချာမသိပါ။ သိရေ လူတိ မှတ်ချက်ပီးထားခကတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါရေ